I-WHEELER LAKE HOUSE (eKalkaska, MI): AMAXABISO OMKHULU WASEBUSIKA!!! Kwi-Wheeler Lake! (Ilungele iintsapho ezinabantwana!)
WHEELER LAKE INDLU
*LAKEFRONT (Ichibi leWheeler)
*** WiFi yesathelayithi ***
Intle, izolile, izolile kwaye izolile, iWheeler Lake House ilungile kwabo bafuna ukuphumla. Zizindlu ezisi-8 kuphela eziphumle kweli chibi labucala ukuze iindwendwe zikwazi ukungena emahlathini, zibone amadada abahlali kunye neeloon, kwaye zonwabele ukuzola kwechibi. Tsibela kwenye yezikhitshane zimbini kwaye ukonwabele ukuloba kulo lonke ichibi lezemidlalo. Uyabuthanda ubusika? Konwabele ukutsiba kwindlela yelizwe egciniweyo kwaye uhambe ngenqanawa ukuya kumzila wemoto yekhephu!
I-Wheeler Lake House inezakhiwo ezi-2: indlu enkulu kunye nendlu yebhanki. Indlu enkulu inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nomgangatho. Ewe kunjalo, kukwakho nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elilungele ukubetha isidlo, okanye ukuba uyathanda, thatha ukutya ngaphandle kwaye uphumle ngelixa usolisayo kwigrill yepropane. Ebusuku, yonwabele ukujonga iinkwenkwezi ngelixa uhlala ujikeleze umlilo wenkampu.
Indlu eyibhanti evaliweyo ixhotyiswe ngescreen esingu-40” esisicaba seSmart TV, esofeni, kunye nebhedi enamawele amabini (ilala 3). Le ndawo ilungele abantwana okanye abaselula. Akukho gumbi lokuhlambela kwibhanti yendlu.
I-Air Conditioning: Indlu enkulu kunye nendlu yeBunk ine-air conditioning kwaye omabini amagumbi okulala anabalandeli besilingi.
ATV's: Ewe, nceda uzive ukhululekile ukuzisa itreyila!
Izilwanyana: Unokubona amaxhama, amadada, amarhanisi, amadada, unomatse, ikaka, mhlawumbi nebhere.
Igumbi lokuhlambela: Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu kunye neshawari kwindlu enkulu.
Ulwandle/Ukuqubha: Uyilo luhamba ngolu hlobo: ingca—iimitha ezi-3 zesanti—amanzi. Emazantsi echibi yintlabathi ethambileyo. Izihlangu zamanzi zinokuzikhethela.
Igumbi lokulala 1: Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enguKumkanikazi
Igumbi lokulala 3: iBunk-House 12x16 (icandiwe kwindlu yonke) kabini
Izikhitshane: Kukho izikhephe ezi-2 ezikroliweyo ezinamaphini ukuze zisetyenziswe ziindwendwe. Uyakwazi ukuzisa injini ukuya kuthi ga kwi-5 yehashe-amandla. Kwaye isikhephe esibheqayo sikwakhona. Kukho iibhatyi zobomi ezi-4 (iisayizi zabantu abadala).
Iibugs: Iibugs eziqhelekileyo zaseMichigan
Inkonzo yeselula: I-Verizon inkulu! Abanye abathwali balungile. I-booster isekhaya.
Idokhi: Idokhi yi-20ft. Akukho kuqaliswa esidlangalaleni kwi-Wheeler Lake. Uyakwazi ukutsiba kwidokhi emanzini ukuze uqubhe.
Ziko: Akukho ziko kweli khaya.
Umgodi womlilo: Ewe! Yiza nees'mores zakho.
Ukuloba: Ezinye iintlanzi eziqhelekileyo oza kuzibona echibini zi-bass, i-pike, i-bluegill, i-perch, i-catfish, kunye ne-sunfish. Kukwakho nofudo oluninzi, lumka ke! Nceda uqiniseke ukuba uzisa iipali zakho njengoko kungekho zinikiweyo kule ndawo. Kwakhona, ukuze ulobe kumachibi aseMichigan, kufuneka umntu abe nelayisensi yokuloba. Unokufumana ilayisenisi yakho yokuloba kwi-Website ye-Michigan DNR.
Igrill: Kwidekhi uya kufumana i-propane grill. Ipropane inikezelwe.
IGrocery Store: IFamily Fare Supermarket - 784 S Cedar St, Kalkaska, MI 49646 (231) 258-2101
I-Handcap Friendly: Masicacise ukuba sithetha ukuthini xa sithetha nge-handcap friendly...kukho inyathelo elinguziro-1 lokungena kweli khaya, kwaye linqanaba elinye (ikhaya lefama). Kukho imivalo kwindawo yokuhlambela yenkxaso yeendwendwe nangona kunjalo, iipaseji azikho kumgangatho osemthethweni wokukhubazeka kwaye azifiki zixhotyiswe ngezixhobo ezikhethekileyo zokunceda abo banesidingo.
I-Intanethi: Ewe, kukho (isathelayithi) iWiFi kwipropati
Iilinen: Ewe, sibonelela ngamashiti akho kunye neelinen. Njengehotele, iibhedi ziyakwenzelwa wena xa ufika. Ukuba unombuzo malunga nokubalwa kwemisonto yamaphepha akho, vele usazise, kwaye siya kuqinisekisa ukuba sishiya ibhedi ivulekele amashiti akho. Sinamaphepha asisiseko, imiqamelo, imiqamelo kunye neetawuli zokuhlambela.
Ukupaka: Uyakwazi ukupaka iimoto ezi-2-4 okanye ii-combos zelori ezi-2/ezirhuqwayo
Izilwanyana zasekhaya: Siyaxolisa, izilwanyana azivumelekanga kule ndawo.
Ubumfihlo: Abamelwane ngokuthe ngqo kumacala omabini e-cottage. Kukho amakhaya asi-8 kuphela echibini.
Abantu abadala: Yizani enye, yizani nonke! Esi sithuba silungile kwabo bangaphezulu kweminyaka engama-60. Ngamanye amaxesha xa urenta ikhaya, awuqinisekanga kakhulu malunga nomhlaba: ingaba ikhaya liphezu kwenduli? iyunithi?, njl. Eli khaya lifumana imvume ye-FVR yolutsha olusentliziyweni!
Ukutshaya: Akukho kutshaya naluphi na uhlobo kuvunyelwe kwipropati. Ngenxa yokusondelana kwabamelwane, akuvumelekanga ngokungqongqo.
Iimoto zeqhwa: Ewe, ungakhwela kanye usuka endlwini. Umzila uqala kwi-bend yokuqala kwindlela esuka endlwini (ngaphantsi kwesiqingatha sekhilomitha ukusuka kwipropati). Kuya kufuneka ukhwele intambo yamandla ukuya eMancelona ukuya kumzila ophambili.
Umntu (umhlali nongahlali) osebenzisa inqwelo-mafutha yekhephu eMichigan kufuneka athenge iphepha-mvume lokuhamba ngenqwelo-mafutha ekhephini. Iphepha-mvume lomzila livumela abathutha ikhephu ukuba bakhwele iindledlana ezinyulwe ngurhulumente kunye namawaka eemayile ezongezelelweyo kwiindlela zikawonke-wonke nakwimihlaba kawonke-wonke (apho kugunyazisiwe). Isebenza unyaka omnye, oqala ngo-Oktobha woku-1 uze uphele ngoSeptemba wama-30 wonyaka olandelayo. Iindlela ezityunjwe nguRhulumente zivulekile ngo-Dec. 1-Matshi 31 kwaye ukulungiswa kwenzeka xa kukho ikhephu elaneleyo emhlabeni.
Indawo: Kukho izakhiwo ezi-2: Indlu yechibi eliPhambili kunye nendlu yaseBunk.
Umabonwakude: Kukho i-TV engama-40” kwindlu eyibhanti kunye neflethi engama-43” kwikhaya elikhulu. Bobabini oomabonakude ngoomabonakude be-Smart. Ungangena kwiakhawunti yakho yeNetflix okanye yeHulu kwaye wonwabele imiboniso bhanyabhanya oyithandayo. Akukho ntambo okanye iTV yesathelayithi, kodwa kukho amajelo asekuhlaleni ali-14 kuzo zombini ezi ndlu zinkulu kunye nakwindlu enkulu.
Iitawuli: Ewe, sibonelela ngeetawuli. Kuhlala kulungile ukuzisa ezongezelelweyo nangona kunjalo. Asiboneleli ngeetawuli zaselwandle.
Iwasha kunye nesomisi: AYIKHO IWASHA! Kukho iwasha kunye nesomisi kwipropathi, nangona kunjalo, iwasha ayikabanjwa. Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise isomisi ukuba kuyimfuneko.
Ukhuni: Ukhuni lubonelelwe.
Intle, izolile, izolile, kwaye izolile, iWheeler Lake House ilungile kwabo bafuna ukuphumla. Kuphela ngamakhaya asi-8 aphumla kweli chibi labucala ukuze iindwendwe zikwazi ukuthatha amaplanga, amadada ahlala kunye neeloon, kunye nokuzola kwechibi. Tsibela kwenye yezikhitshane zimbini kwaye ukonwabele ukuloba kulo lonke ichibi lezemidlalo. Uyabuthanda ubusika? Yonwabela ukuba nethemba kwindlela yelizwe egciniweyo kunye ne-vroom ukuya kwindawo yemoto yekhephu!
I-Wheeler Lake House inezakhiwo ezi-2: indlu enkulu kunye nendlu yebhanki. Indlu enkulu inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nomgangatho. Ewe kunjalo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lilungele ukubetha isidlo okanye ukuba uyathanda, thatha ukutya ngaphandle kwaye uphumle ngelixa usolisayo kwigrill yepropane. Ebusuku, yonwabele ukujonga iinkwenkwezi ngelixa uhlala ujikeleze umlilo wenkampu.
Indlu eyibhanti evaliweyo ixhotyiswe nge-TV yesikrini esisicaba esiyi-40, ibhedi, kunye nebhedi enamawele amabini (ilala 3). Le ndawo ilungele abantwana okanye abaselula. Akukho gumbi lokuhlambela kwibhanti yendlu.